Uummata keenya irratti yakka diini rawwatu dhuga itti himu qabna.
Dhaabbilen Oromoo heddu fi ogannon Oromoo heddun waan Habasha fi Amanta mufachiisu Oromoof media kamiinu ibsu hin feedhan. Sababin isaa jallatamu fi deggersa dhabna jeedhan soodatu, kun amala qabsa’aa miti, ayyanalalatumadha, waan saba ofi midhu saba ofiti beeksisun dirqama. Dargaggoota ofi barsiisu dha male jallaala diina ykn jallaala wara amanta dhabna jeedhan haqa dhoksun hojii qabsa’a dhuga miti. Qabsa’aa dhugan obboleesi isaa ilee waan saba isaaf hin malee yoo hojeete dabarse lachu qaba. Kaayyoo fi waadan ykn irbuu saba isaaf gale cabsu hin qabu, warreegamuu qaba male.
Baroota darban keesummati bara 2014 kasse qabsoo Dargaggoon (Qeerron) Oromoo geggesa jiru irratti diini hin dulin hin jiru, Dhaabbiileen Habasha hundi, Diasporan Habasha Neo-Minilikan, Median Habasha hundi fi waldan amanta hundi Oromoo ajjeefama jiru irratti qoosa fi xiiqeesa turan. Qeerroo Oromoo irratti wari dura dulaa labse waldalee Amanta Ethiopia keessa jiran hunda Weqeefataa irra kan hafe, Ortodooksiin Ethiopia amntalee hunda (Musilima, Kaatoolik fi Protestant) wajjiira isaaati waamun Ministera dhiima federaalla waliin taa’uun murte yakka irratti murtesani jiru. Murte isaan kana ammoo hanga Mumiicha Ministera Ethiopia Haile Mariyam Desalenyiti beekisisan jiru kana jeechun Mootumman tarkanfi ciimma ijoollee Oromoo irratti akka fudhatan hayama keenu isaanti. Nuu garuu Abbootin Amanta kun Mootummaan gaafi mirga ijoollee gaafatan kanaaf kara nagaa deebbii akka keenuf mootummaa gaafatu (kadhatu) jeene isaan irra egne ture, waan isaan hojjeetan garuu saba Oromoo irratti dugugga sanyii ballessa mootumman fudhacha ture mirkanessanfi galan. Kun Cubuu warii amanta Oromoo irratti jaaraa 21ffaa keessa raawwatan jeene galmeesine jira. Jarii kun yakka kana akka hin raawwane mirga ijoollee Oromoof akka dhabatan maqa Luba Gudina Tumsan isaan kadhata ture, Gooftooli koo jene xalayaa itti barreessa ture nu dhaga’uu hin barbaane, TPLF jala bu’aan dibee rukuta turan luboota Murasa walda Makaneyesusi irra kan hafe. Waldan Amanta Muslima ilee akkumma bara 2005 Sheek Eliyas TPLF waliin dhabate ajjeechan raawwatame kan nu tilmamne irra xiiqqoodha jeedhe dubate dugugga sanyii balleessa Qeerroo Oromoo fi saba Oromoo irratti raawwatame ilee waliin mirkanessa turan. Ijiibata hunda erga goone booda yeroo mediati waan xiiqqoo gadi bafnu Oromoon wa’ee amanta hin dubatiina jeedhe waacuu egala, nu ammoo kan jeenu Amanta TPLF deggeru hundi TPLF waliin qixee ilaala kana booda yakka isaan dalagan Kitaabati bafne saxiiluuf deemna Amantan Oroomummaa nuu caaluu hin jiru.
Luboon fi sheekoon heddun USA fi Finfinne gidu deedebi’uun goocha TPLF tumsa turan. Yeroo heddu gorsa fi waamiicha nu goonef deebbi nu hin lane, xiifuma TPLF waliin waltajiiti ba’aan dhiichisa turan, jammaa fayyifna, naafa fayyifna jeechun Amanta soban Oromoo mata keessa rukutuun waltajii amanta irratti reebuu egalan kun garuu dirama wayyanneeti malee dhuga miti, Luboon Oromoo heddun kun soba ta’uu ragaa nuuf ba’ani jiru, maqa isaan yoo ibsuun barbaachise ibsu dandeenya.
Ortodooksin Uummama ishee irra kaafte yakka Dugugga sanyii Oromoo balleesu irratti raawwcha turte raawwacha jirti. Ethiopia Dugugga sanyii Oromoo balleesu Tewodros Uummata Oromoo walloo irratti raawwate, Dugugga Sanyii Oromoo balleesu Yohans Uummata Oromoo Rayyaa, Walloo irratti raawwate, Dugugga sanyi Oromoo Balleesuuf Minilik yakka inni Oromoo mara irratti raawwate hunda Eebba fi deggersa Ortodooksi Ethiopian ture. Ortodooksiin Ethiopia siirna Garbonfata Tewodros, Yohans, Minilik, Haile Silase fi TPLF keessati hojii basasumma fi hojii burjajesu saba Oromoo irratti raawwachu irra darbee lafa Oromoo hektaroota Millionan lakkaawamu samee, Oromoo hojjeechifachun garbonfata ta’ee ture. Siirna garbonfata mootumma ofin jeedhu caalaa yakka guda dalagu isaa abootin keenya lubun jiran raggaadha, kun seena miti nama lubun jirutu dubaachuu danda’aa. Oromoon Walloo fi Rayyaa gorsa fi tumsa Ortodooksii Ethiopian Eenyuumaa isaan dhaban, Afaan fi Amanta isaan Mollqaman Afaan horma dubaachuu fi Amanta horma hordoofuuf dirqaman. Yakka siirni garboonfata Habasha dhugagga sanyii balleessa Oromoo irratti waggaa dhibba afur ( 400 ) ol raawwata jiru hunda caalaa ga’ee guda kan raawwate Ortodooksii Ethiopiati. Ortodooksiin Habasha waltajii Oromoo Eebbisuuf Mirga fi Hamilee hin qabu kan jeenuuf kanaaf.
Akkuma gubatti ibsuu yaale Siirni Garboonfata Habasha, Dhaabbiilee Habasha, Median Habasha fi Dhaabbileen Amanta yakka Oromoo irratti raawwatan murannon dura dhabane falmana sababiin isaa waan soodanu hin qabnu. Warii kan waan sodatanfi jara kana hin saxiilan xifumma iyuu waan isaan jeedhan tole jeedhan fudhatu, maliif yoo jetan deggersa isaan barbaadu, maallaqa irra argachu barbaadu, media isaanti fayadamuu barbaadu, walumagalati fayyida dhunfa fi Angoo barbaadu. Kun ammoo waan qabsa’aa tokko irra egamu miti.
Yaa’iin Oggaanssa Oromoo 2ffaan Washington DC Qeesii Habashan Oromoo Eebbisu yaalun cubudha, ofti amanammuma dhabu fi of iyuu kan hin bilisoomne ta'uu argisisa. Sababin isaa OLC Atlanta akkuma geggefame buleen ESAT tvn Waltajiin Atlanta kun Qeesii Ortodooksii afeeru dhisun isaa siiri miti jeechun irra dedebi’ani ijoollen habasha wacaa turan. OLC kaleessa DC irratti godhame kun Habasha fi ESATiin gamachisuuf jeecha Oromoo tufatan diini Oromoo Oromoo akka Eebbisu godhan dhiyeesun ofti amanammuma dhabu isaan argisisa. Waldan Ortodooksii Ethiopia Oromoof kabaja hin qabu Afaan Oromoo akka badu kan barbaadu, lafa Oromoo kan same Oromoo Walloo dha kaasee hanga Boranati kan lafa irra dugugge ta'uu isaa Oggana kan ofiin jeedhu kana dagachuu hin qabu.
Ortodooksiin Waltajii Oromoo Eebbisuuf mirga fi Hamilee hin qabu sababin isaa wagoota kudhani (10) ol Ortodooksiin Ethiopia Kitaaba Rayii Mariyam jedhamu Waldan Amanta Ortodooksii bara 1960 maxansee raabise akka Waldalee hunda keessa funane gubu fi Oromoo dhiifama gaafatuu itti himame jeenan gaafii Oromoo tufate deebbi dhorkate jira.
Waldan kun fi Kitaabi soba kun Maqa Yesusi fi Maqa Mariyamin sobuun isaa Amanta Ortodooksii sobduu godhe jira. Waldan Ortodooksii jibinsa guda fi dugugga sanyii balleesu Oromoo irratti raawwate jira. Uummati walloo Amanta akka jijjiru jedhame ajjefame kan dhume ajaja Ortodookis fi Ogannota isaanin.
Waldan kun Kitaaba Rayii Mariyami funane gube Oromoo dhiifama utuu hin gaafatiin waltajii Oromoo Eebbisuun hafnan lafa Oromiyaa irratu Amanta Oromoo balleesuuf ka'ee kana Amanta Orthodooksii geggesu hin danda'u.
Waldan Amanta Ortodooksi Ethiopia dhaloota isaati kassee Oromoo balleesuuf institution (qama) dhaabate ykn ijjarame dha, qamnii Oromoo abaraa ture kun amma ilee Oromoo garaa isaati Eebbisaa jira jeene amanun gowwumadha. Dhaabbii Oromoon Bilisummaa bassa jeedhu tokko dura ofi isaa bilisoommsuu qaba. Habashan waaqaa na kadhadhu siiranin Bilisoomma jeechun salphina. Habasha Waliin Hariroo Uummadhen Oromoo Bilisumma bassa jeechun gowwumadha. Dabbileen Oromoo waliga’ii Eebban egalu qabu yeroo jedhamu abbootii Gadaan akka Eebbifaman sirna Gadaa keessatti godhama ture. Ammalee kanumatu godhamu qaba malee amantaan habasha, amantaan Faranjii fi amantaan Arabaa sirna waltajjii Oromoo akka Eebbisaan seerii hayyamu hin jiru. Dhabbii akka Macaa fi Tuulamaa dhabbii WFDO fi ABO hanga yowonaatti waltajjii isaan abbootti Gadaa nama sadiin akka Eebbiifamu godhama malee amantaa hormatiin Eebbisifatan hin beekan. Falmiin keenya dhabbii Oromofin hojjedha jedhu seera Gadaa caabsuu hin qabudha.
Dhaabbii yookan namni waan hunda irra ofi hin bilisommsin saba isaa bilisommsu hin danda’u. Dhaabbi ykn Ogannii qama birra jala adeemu demkratawwa ta’ee haqan hojeechu hin danda’u. Kanaafuu siyaasaa keessati dhaabbi kamu fi Oganoon dhaabba kami iyuu dhiibba amanta, Ganda ykn gartuu maallaqa ykn tujaroota irra bilissa ta’uu qabu. Keessumati dhaabbii Bilisumma sabaf qabsa’u Dhaabbichis ta’ee Oganni isaa warraaqaa ta’u qaba. Kan maallaqa, Angoo, Ganda, fi Amantan takalamuu hin dandeenye ta’uu qaba. Kun ta’uu banan dhaabbich ykn Ogannich Uummata isaa bilisumma basuu dhisi of isaani iyyu samuu isaani bilisoommsuu hin danda’an. Siyaasaa Adunya kana borcee tasgabii fi nageenya dhorke kan jeequmsi akka babalatuu goocha jiran Ogannota Maqa Amanta, Ganda, ykn Abbooti qabeenyan wara miciraman dha. Qabsa’aa warraaqaan samuu isaa fi kaayyoo saba isaa ( seera fi heera dhaabba isaa) irra kan hafe waan itti ajjajamu birra qabachuu hin qabu. Waan amma si’ana arga jiru garuu waan nama gadisisu dha. Biyaa tokkon bulcha jeecha halkan gosa isaa waliin dhoksati mari’atu, deemokrasiin mirkanessa jeecha media fi waltajii hunda akka qabeenya dhunfa PLC isaani godhani itti fayadamu, Amanta jala lixaan ittin warra kan sodachisu yaalu, ykn ittin gartuu (tefozoo) mazgida fi church keessa horaachu yaalu, gartuu (tefozoon) akkasi ammoo qabsoof hin ta’uu. Deggeran haqan qabsoo deggeru fi deggeran (tefoozoon) gosa ykn amantan horaatan tokko miti. Dhaabbii ykn Oganni gaafa waa’ee ganduma, Amanta, Gosa, fi fayyidan takallammu egale qabsoo keessa galuu isaati ykn qabsiicha kufisuun isaa hubatamu qaba. Kanaafuu qabsa’oon waan hunda waltii dhiibu irra ejjeenno cimma tokko qabachuun Eenyuuma fi Oromummaa ofif falmachuun waan bori itti hin gabine ta’aa. Amantan ni jijjirama, Maallaqii ni dhuma, Angoon ni darba, dargagguman duluman bakka bu’aa waan hin dabare fi hin jijjiramne Eenyuumaa (Oromummaa qoofa) dha.